I-Sea Pines Dredging Project, isifundo seMarina Dredging Case
Amayini Olwandle Ehliselwa Kuthrekhi Ukuqedwa Kwasekuqaleni KukaMashi
Ukudilizwa kabusha kwe-Harbour Town Yacht Basin eseHilton Head Island kubonakala kuqhubeka njengoba bekuhleliwe, naphezu kokuhluleka kwemishini, ukuvuza nokulungiswa kwamapayipi, ngokusho kwemibiko yokuhlolwa kwansuku zonke.
Umsebenzi uqalile ngo-Dec. 4 ukungavuli isisekelo se-yacht. Ama-marineas aseGull Point naseSouth Beach kanye naseBraddock Cove creek ngaphakathi kweLwandle Amaphayini nakho kuzodilizwa.
Kuze kube manje, cishe amayadi angama-cubic we-56,000 we-sediment asusiwe esiteshini sokungena nesisekelo sangaphandle, ngokusho komhloli kanye nomphathi wephrojekthi uLarry Setzler weGEL Engineering.
AbakwaCrew babebuyele emsebenzini ngoLwesihlanu ngemuva kwekhefu lezinsuku ezine ezungeze uKhisimusi futhi bebesusa imicengezi engaphakathi.
Sekukonke, usonkontileka u-Orion Marine Construction Inc. uhlela ukumpompa ngaphezu kwama-cubic yards angama-240,000 endaweni eyi-100 acre emlonyeni weCalibogue Sound, cishe imayela ukusuka kuzwane lwesiqhingi namamayela ayi-1.5 ukusuka eDaufuskie Island. Imisinga enamandla yomsindo kufanele ikhiphe indle olwandle, ngokusho kwe-US Army Corps of Engineers.
"Sinethemba lokuthi sizophothula umcengezi wezikebhe maphakathi noJanuwari bese sidlulela eBraddock Cove creek bese sidlula kwinqubo efanayo yokwehlisa iSouth Beach kanye namaGull Point marinas," kusho uSetzler ngoLwesihlanu.
Wonke lo msebenzi kufanele uqedwe ekuqaleni kukaMashi, ngokusho kukaSetzler noMark King, umongameli weClub Group, ophethe i-Harbour Town Boat Slip Owners Association.
Umsebenzi wokusula ibheshi le-yacht bekufanele uqedwe ngoKhisimusi, kepha izivunguvungu zase-East Coast zibambezele ukufika kwemishini cishe isonto.
Yize kunjalo, "kuze kube manje, konke kuhambe kahle," kusho uKing.
UStezler uvumile. Kepha iphrojekthi bekulokhu ngaphandle kwesigameko. Abasebenzi kuye kwadingeka balungise ukuvuza kwe-pin-hole bese esikhundleni sezindawo zepayipi elonakaliswe imfucumfucu ne-riprap eyayigcinwe yi-hydraulic dredge. Ukuhlanza kakhulu amaphampu nekhanda eligoqeka ngaphakathi elingena ngaphansi kwephayini nakho kwakudingeka.
AbakwaCrew babambe futhi balungisa ukuvuza ngokushesha, futhi akukho monakalo we-dredge oqoqiwe ezindaweni ezivuzayo, ngokusho kwemibiko yansuku zonke ethule izidumbu.
"Ukudonswa kwamiswa ngokushesha, kwaphinde kwampompa amanzi kwaze kwaba yilapho kulungiswa ukuvuza," kusho uSetzler.
Uthe kulindeleke ukuthi kuqhekeke imishini nokuvuza okuncane kwimishini ebilokhu isebenza amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto.
Ucwaningo nemibiko yokuhlola ibuye ikhombise ukuthi iningi lezinto ezibonakalayo zidonswa olwandle njengesibikezeli, ngaphandle kwesithambeka esingamamitha ayi-100 esingamamitha-skwele ukuphakama.
USetzler uthe indunduma kungenzeka ukuthi ibangelwe yisihlabathi esikhulu cishe i-15 kuya ku-18 ukuphakama okungamamitha asuswe ekhoneni lomgodi ongaphandle, futhi kuzodinga isikhathi sokuhlakazeka.
"Sizoqhubeka nokuyiqapha, futhi uma ingashabalali nomsinga, sizongena sihudule ugongolo ukuze siludilize noma silusakaze ngobuso," kusho uSetzler.
Imisebenzi yokwehliswa ibhekwe ngabomvu ngabalawuli, njengoba kungumsebenzi wokuqala wokumba wangasese kuhulumeni ovunyelwe ukulahla impango yokulahla emanzini asogwini, ngokusho kwezikhulu zombuso.
Umhloli kumele abe khona kuwo wonke umsebenzi.
Imizamo yangoLwesihlanu yokuthola ummeli ovela kwa-Army Corps of Engineers ayiphumelelanga.
Le projekthi ixhaswa ngasese yiqembu labanikazi bezikebhe zesikebhe kanye nabahlali beLwandle i-Pine, kanye ne-Sea Pines Resort ne-Gull Point kanye nama-marinas aseSouth Beach.
Okucashunwe ku: I-Island Packet
Qala Iphrojekthi Yakho Yokulondolozwa Kwembobo Nge-Ellicott